Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo - Xannaanada Ilmaha San Diego
Ka codso CareWait
Appka iyo CareWait
Ilaa intee ayaan sugi doonaa?
Ma naqaano. Waxaan fahamsanahay sida ay u niyad jabto inaad sugto markaad u baahato caawimo isla markaaba.
Waxaan rajeyneynaa inaan ku siin karno jawaab cad, laakiin waxay kuxirantahay inta maalgelin ee la heli karo xilligan.
Xaqiiqdu waxay tahay qoysaska qaarkood waxay sugaan toddobaadyo, bilo, ama xitaa sannado.
Warka fiicani waa marka aad noo soo gudbiso hal codsi, waxaanu codsigaaga la wadaagaynaa ilaa 4 hay'adood oo kala duwan. 4-da hay'adood ee wada-hawlgalayaasha ah waxay aad ugu shaqeeyaan si ay ugu adeegaan qoysas badan intii suurtagal ah. Marka maalgelinta iyo furitaanka la helo, waxay kula soo xidhiidhi doonaan sida ugu dhakhsaha badan.
Waa muhiim inaad codsigaaga ka dhigto mid taagan. Haddii codsigaagu aanu la kulmin waxqabad muddo 6 bilood ah, codsigaagu wuu xidhmayaa. Xitaa haddii aysan jirin wax isbeddel ah oo ku yimid macluumaadkaaga, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad gasho, dib u eegto, oo aad kaydsato codsigaaga 3 ilaa 5 biloodba mar si aad uga fogaato xidhidhiyaha.
Miyaan ka heli karaa "ku tumasho" liiska?
Nasiib darro, ma jirto qaab aad liiska ugu “kufsan karto”.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ilmahaagu ku jiro xaalad khatar ah ama deegaan waxyeello leh, nala soo xiriir isla markiiba.
Dawladdu waxay siisaa dookh qoysaska leh kiis firfircoon oo Ilaalinta Carruurta si looga saaro carruurta deegaanka waxyeellada leh.
Waa maxay Xannaanada Ilmaha ee la kabo?
Xannaanada carruurta ee la kabo waa caawimo xagga bixinta kharashka daryeelka ilmaha ama xannaanada. Waxaad u qalmi kartaa iyadoo ku xiran dakhligaaga guud ee bisha, tirada qoyska, iyo baahidaada. Qoysaska ay soo gudbiyaan Adeegyada Ilaalinta Ilmaha ayaa laga yaabaa inay leeyihiin mudnaan.
Sideen ugu qalmaa daryeelka ilmaha la kabo?
U qalmida kaalmada daryeelka ilmaha ee la kabo waxay ku salaysan tahay 3 arrimood
Dakhligaaga guud ee billaha ah ee dhammaan ilaha (canshuurta ka hor), tirada qoyska, iyo baahida.
Intaa waxaa dheer, qoysasku waa inay ku noolaadaan Degmada San Diego si ay ugu qalmaan.
Eeg haddii aad tahay u qalma, si aan u isticmaalno xisaabiyaha u-qalmitaankayaga.
Maxaad uga jeedaa dakhliga guud ee bishii?
Dakhliga guud ee bisha macnaheedu waa dakhliga ka soo gala dhammaan ilaha, oo ay ku jiraan dakhliga ka soo gala shaqada ka hor inta aan canshuurta laga jarin, masruufka carruurta, guddiga ama gunnada, dakhliga lagu helo kirada, iwm.
Waa kan miis lagu caawinayo.
Tirada Qoyska 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Income 5,889 6,511 7,441 8,632 9,823 10,046 10,269 10,492 10,716 10,939 11,162
Haddii aad tahay qoys ka kooban 4 (laba waalid iyo laba carruur ah) oo aad leedahay dakhli guud oo bishiiba ah ilaa $7,441.00 cashuurta ka hor, markaa waxa laga yaabaa inaad u qalanto kaalmada dhaqaale ee daryeelka ilmaha.
Maxaad uga jeedaa 'baahi'?
Haddii mid ka mid ah xaaladahan uu qeexayo qoyskaaga, waxaad u qalmi kartaa kaalmada dhaqaale ee daryeelka ilmaha.
(b) Shaqo raadis
(d) Dhigashada dugsiga ama tababarka
(e) Helitaanka Adeegyada Ilaalinta Ilmaha (CPS)
(f) Dugsiga barbaarinta waxbarashada ee maalinta-dhiman
(g) Raadinta guri joogto ah
Si loo arko haddii aad tahay u qalma, guji halkan si aad u isticmaasho xisaabiyahayaga u-qalmitaanka.
Ma u qalmi karaa haddii dakhliga reerkaygu yahay eber?
Haa, qoys kasta ayaa codsiga ku buuxin kara dakhli eber ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagaa doonayaa inaad soo gudbiso is-caddeyn oo sharxaysa sida qoyskaagu isu taageero dhaqaale la'aan.
Waxba ma bixiyaa?
Waxaa laga yaabaa in. Waxay kuxirantahay xaalada qoyskaaga.
Qoysaska qaar wax lacag ah ma bixiyaan. Halka qoysaska kale ay bixiyaan kharash yar oo ku saabsan daryeelka ilmaha ama xanaanada.
Laakiin waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad bixiso kharashka waalidka.
Waydii shaqaalahaaga diiwangelinta marka ay wacaan waraysi. Inta badan, khidmadda qoysku waa qayb yar oo ah wadarta kharashka daryeelka ilmaha.
Xaalad kasta ha ahaatee, waxaanu halkan u joognaa inaanu kaa caawino fududaynta culayskaga dhaqaale.
Ma ku talin kartaa barnaamijyo kale oo iga caawin kara kharashyada daryeelka ilmaha ee qaaliga ah?
Haa Dhab ahaantii! Waxaad u qalantaa dhammaan gargaarka aad heli karto.
Waxaan halkaan u joognaa inaan ku barano dhammaan fursadaha suurtagalka ah si aad u yareyso culeyska dhaqaale ee saaran qoyskaaga.
Hal barnaamij oo aanu aad ugu talinayna waxa loo yaqaan Head Start. Head Start waxa ay lacag ka heshaa dawladda dhexe si ay ugu kaalmayso qoysaska xaqa u leh maalin-dhiman iyo xaaladaha qaarkood, dugsiga barbaarinta carruurta oo maalin-buuxa ah.
NHA Head Start - Bartamaha: (888) 873-5145
AKA Head Start - Degmada Bari: (619) 444-0503
ECS Head Start - South Bay: (619) 228-2800
MAAC Head Start - North County: (760) 471-4210
La xidhiidh Head Start si aad wax uga waydiiso shuruudaha barnaamijka.
Noocyada kale ee kaalmada dhaqaale marka laga reebo daryeelka ilmaha, la xidhiidh 2-1-1.
Waxa aan hadda ka hor ka helay gargaarka lacageed ee Degmada CalWorks Program. Miyaan weli codsan karaa?
Qoysaska hadda helaya kaalmada CalWORKs oo ay ku jiraan dadka waaweyn iyo carruurta waa inay la xiriiraan shaqaalaha adeegyada shaqada degmada ee daryeelka carruurta iyo/ama wac mid ka mid ah hay'adaha hoos ku qoran. Qoysaska helay CalWORKs 2dii sano ee la soo dhaafay waxay waci karaan mid ka mid ah wakaaladaha hoos ku qoran si ay u ogaadaan inay u qalmaan.
Associates Development Associates, Inc.(CDA) 619.427.4411 ext. 1400
Adeegga Ilaha Daryeelka Ilmaha YMCA 619.474.4707 ext.2485
Ka dib markii aan gudbiyay codsigayga, waxay ii sheegtay "darajadayda." Waa maxay macnaha "darajo"?
Isku day inaadan u qaadan Darajada inuu yahay lambarkaaga sugitaanka.
Darajo waa tilmaanta mudnaanta qoyska marka laga yaabo in laga caawiyo daryeelka ilmaha. Darajooyinka hoose, sida 1-5, ayaa marka hore la wici doona ka hor inta aan la gaarin darajooyinka sare sida 6-10.
Darajo waxay ku salaysan tahay inta qof ee qoyskaaga iyo inta lacag ee aad sameyso. Tusaale ahaan:
Qoys ka kooban 3 qof oo dakhligoodu yahay $64/bishii ayaa darajooyinkoodu noqon doonaa 1.
Laakiin qoys kale oo 3 ah oo dakhligoodu yahay $919/bishii ayaa laga yaabaa inay darajo 10 ah galaan.
Tani waa sababta aan u adkeynay muhiimada ay leedahay in codsigaaga la cusbooneysiiyo. Nala soo socodsii xaaladda qoyskaaga.
Miyaan ku soo wici karaa warbixin ku saabsan heerka codsigayga ama macluumaadka Meelayntayda Darajooyinka?
Nasiib darro, ma awoodno inaan ku siino macluumaadkaas. Waxaan fahamsanahay sida ay u adag tahay in la sugo ilaa ay wakaaladu ku soo wacdo. Hubi, hay'adahayadu waxay si adag u shaqeeyaan si ay u caawiyaan qoysaska adiga oo kale ah si ay u helaan kaalmada dhaqaale ee aad u baahan tahay.
Waxaan sameyneynaa sida ugu fiican ee aan ku heli karno.
Dhanka kale, waa kan hal shay oo aad samayn karto si aad wax u fududayso marka ay wakaaladu ku soo wacdo.
Soo hel daryeelka ilmaha ama bixiyaha xanaanada maalinta ugu fiican ee aad u rabto qoyskaaga. Si marka ay wakaaladu ku soo wacdo, aanu u habayn karno codsigaaga si degdeg ah.
Waalidiin badan ayaa gefka ah inay garan waayaan xannaanada ilmahooda ama xannaano-maalmeedkooda marka ay wakaaladu soo wacdo. Tani waxay keeni kartaa dib u dhac badan, ama xitaa lumiso mudnaantaada.
Haddii aadan hubin meesha aad ka bilaabayso, kala soo bax hagahayada bilaashka ah, 5 Siyaabood oo lagu Helo Xanaanada Carruurta ugu Wanaagsan San Diego.
Sideen ku heli karaa liiska bixiyeyaasha xanaanada cunugga?
Adeegga Ilaha Xannaanada Ilmaha ee YMCA (CRS) waa wakaalada Kheyraadka iyo Gudbinta (R&R) ee deegaanka San Diego County. Waxay kaa caawin karaan inaad aqoonsato bixiyeyaasha xanaanada cunugga ee agagaarkaaga.
La xidhiidh YMCA CRS oo la hadal la-taliyaha R&R si aad uga raadiso bixiyeyaasha u dhow gurigaaga, dugsigaaga, ama goobta shaqada. Waxay kuu soo diri karaan liiska bixiyayaasha si aad u soo booqato oo aad bilowdo raadintaada daryeel.
Adeegga Ilaha Xannaanada Carruurta YMCA: (800) 481-2151
Waxa kale oo aad sameyn kartaa in Raadi internetka.
Waa maxay nooca xanaanada cunugga aan heli karo?
Waxaad dooran kartaa daryeelka ilmaha sida ugu wanaagsan u buuxinaya baahiyaha qoyskaaga. Waxaan kugula talineynaa inaad baarto barnaamijyada kaalmada kala duwan iyo noocyada bixiyayaasha ee jira.
Barnaamijyada Xannaanada Ilmaha ee la kabo
Kuwa soo socdaa waa bilaash ama barnaamijyo xanaano caruureed oo qiimo jaban oo ay heli karaan qoysaska u qalma dakhliga:
Barnaamijka Hore ee Head Start / Head Start
Barnaamijka Preschool ee Gobolka California (CSPP)
Shabakadda Waxbarashada Guriga Daryeelka Carruurta Qoyska (FCCHEN)
Barnaamijka Lacag-bixinta Beddelka ah (APP)
Noocyada Xannaanada Carruurta
Noocyada bixiyayaasha soo socdaa waxay leeyihiin saamiyo kala duwan, awoodda, caafimaadka iyo heerarka badbaadada iyo shuruudaha:
Xarumaha Xannaanada Ilmaha ee shatiga leh
Guryaha Xannaanada Ilmaha Qoyska ee Ruqsadda leh
Qoyska, saaxiibka, ama deriska
Hel taageero bixinta daryeelka ilmaha.
wax ka beddel_1
Eeg agabka bilaashka ah ee waalidka
Ii eeg kheyraadka bilaashka ah
Liiska U-qalmitaanka Dhexe ee Degmada San Diego
Khadka bilaashka ah: 1-800-521-0560
Raadi Xannaanada Carruurta
NUM 2022 Dhammaan xuquuqaha ayaa leh
Naqshad By Sagetree